ကနျပကျလကျ ဒါဘာပှဲ ဘယျနှခုနှဈမှာကငျြးပခဲ့သလဲ – Federal Journal
ကနျပကျလကျ ဒါဘာပှဲ ဘယျနှခုနှဈမှာကငျြးပခဲ့သလဲ
ဒီရက်ပိုင်းဖုန်းထဲမှာ ဒေတာတွေများလာလို့ Ex HDD ထဲ ရွှေ့သင့်တာရွှေ့၊ ဖျက်သင့်တာ ဖျက်ပစ်ရင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လကျော်က သဝဏ်လွှာတစ်ခုကို သွားတွေ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ မှာ ကျရောက်တဲ့ ၆၇ နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကိုပေးပို့တဲ့ သဝဏ်လွှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သဝဏ်လွှာမှာတွေ့ရတဲ့ သမိုင်းမှားတစ်ခုက ချင်းအမျိုးသားတော်လှန်ရေး သမိုင်းမှာအင်မတန် အရေးပါလှသလို၊ ချင်း အမျိုးသားနေ့ သတ်မှတ်ရာမှာလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားခဲ့ရတဲ့ ၂၀.၂.၁၉၄၀ မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကန်ပက်လက် ဒါဘာပွဲကို ၂၀.၂.၁၉၃၈ လို့ ခုနှစ်သက္ကရာဇ် မှားယွင်းဖော်ပြထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချင်းအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်များကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ် တင်ပြရာမှာ အတွေ့ရအများဆုံး အမှားသုံးခုရှိပါတယ်။ ကန်ပက်လက် ဒါဘာပွဲ ကျင်းပတဲ့ ရက်စွဲအမှား၊ ဦးဝမ်းသူးမောင်းအပါ ချင်းခေါင်းဆောင်ကိုးဦး ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ရက်စွဲအမှားနဲ့ ချင်းတောင်စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး စည်သူဦးသိမ်းမောင် (အေ၊ တီ၊ အမ်) အား ဦးစည်သူမောင် ဟု မှားယွင်းသုံးစွဲနေမှုများပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ချင်းအမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို အနှစ်ချုပ် ဖော်ပြရလျှင် ချင်းအမျိုးသားများဟာ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ် လက်အောက်ကိုကျရောက်ပြီးနောက် အခြေအနေအရ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်မှာပဲ ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ဆီကရတဲ့ စစ်ပညာနဲ့ပဲ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ကို ပြန်လည်တော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်မှာတော့ မေမြို့ (ယခု ပြင်ဦးလွင်) မှာ “ချင်းအမျိုးသားများ ပညာ မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့”ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းအဖွဲ့မှာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဗိုလ်ကြီးအွမ်ပိုင်း (ဆူဘီဒါ)၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဝမ်းသူးမောင်းနဲ့ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ရက်လောင်းလိန်းတို့မှ ဦးဆောင်ခဲ့ကြပြီး အဖွဲ့ ဝင်များအဖြစ် မြေပြန့်အရှိုချင်းများနဲ့ လူရှည်များ ပါဝင်ခဲ့ ကြပါတယ်။
ဦးဝမ်းသူးမောင်းဟာ (၂၄.၁၂.၁၉၂၄) မှာ အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်ရဲ့ ဆူဘီဒါရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ၁.၆.၁၉၂၅ မှာ ဝမ်းသူးရွာမှာပဲ နေရှင်နယ်ကျောင်းဖွင့်ပြီး အမျိုး သားရေးအတွက် စတင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဦးဝမ်းသူး မောင်းဟာ ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ မင်းတပ်မြို့နယ်၊ မသုန်နူး ကျေးရွာမှာ “ချင်းအမျိုးသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့”(ခ.မ.ည.ဖ) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၎င်းအဖွဲ့ကိုပဲ ၁၉၃၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်မှာ “ချင်းတောင် ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့”ဟု ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး၊ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ ဗြိတိသျှ ဘုရင်ခံထံ ချင်းအမျိုးသားများ ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့် အရေးနှင့် နစ်နာချက်များအား တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဘုရင်ခံမှ မကွေးတိုင်းဝန်ရှင်တော်မင်းကြီး မစ္စတာ မက္ကရီကင်အား တာဝန်ပေးတဲ့အတွက် ဖလမ်းအရေး ပိုင်မစ္စတာ အယ်ဘီနီလာ၊ ကန်ပက်လက် နယ်ခြား ဝန်ထောက် ဂျေ-ဖူးညိုတို့နဲ့အတူ ကန်ပက်လက်သို့ သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ မှာ ကျင်းပ တဲ့ ဒါဘာပွဲကို ဦးဝမ်းသူးမောင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ ချင်းတောင်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်လူထု ၁၀ဝ၀ ကျော်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ချင်းအမျိုးသားများမှ မစ္စတာ မက္ကရီကင်အား ၎င်းတို့လိုလားချက်များကို တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
မစ္စတာမက္ကရီကင်မှ ချင်းတောင်ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့မှ တောင်းဆိုထားသော အရေးကြီးအချက်များမှ ချင်းတောင်ဒေသအားပခုက္ကူဒိစတြိတ်အတွင်း ထားရှိ မည့်ကိစ္စအား လုံးဝ စဉ်းစားမည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ကျန်တောင်းဆိုချက်များအားလည်း မလိုက်လျောနိုင် ကြောင်း ဖြေကြားရာမှာ လူထုမှ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး လက်သီးလက်မောင်းတန်း၍ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ဒါဘာပွဲမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ဝန်ရှင်တော် မင်းကြီး မစ္စတာမက္ကရီကင်နဲ့ အဖွဲ့လည်း ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်ပြီး မြင်းကိုယ်စီစီးကာ မကွေးတိုင်း၊ ဆောမြို့ နယ်သို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့ ဗြိတိသျှအစိုးရဟာ ချင်းတောင် ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကို မတရားသင်းကြေညာပြီး ၂၄.၃.၁၉၄၀ မှာချင်းတောင်အရေးပိုင် မစ္စတာ အယ်ဘီနီလာနဲ့ နယ်ခြားဝန်ထောက် ဂျေ-ဖူးညိုတို့မှ ဦးဝမ်းသူးမောင်း အပါအဝင် သခင် ကိုးဦးအား ဝမ်းသူးရွာမှာပဲ ချင်း တောင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ (၁)၊ (ဃ) နဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို စစ်ဆေးရန် အစောင့်၊ နယ်ခြားစစ်သား ၁၁ ယောက်နဲ့ ကန်ပက်လက်မြို့မှ မိုင်ပေါင်း ၆၀ဝ ကျော် ဝေးတဲ့ ဖလမ်းမြို့သို့ပို့ပြီး ပထမအသုတ်အဖြစ် ထောင် ချခဲ့ပါတယ်။ သတ္တမအသုတ်အထိ ဖမ်းဆီးမှုများရှိခဲ့ပြီး ဖလမ်း၊ တီးတိန်၊ ဟားခါး၊ မြင်းခြံ၊ ကသာနဲ့ မန္တလေး ထောင်များမှာ ချင်းအမျိုးသားပေါင်း (၁၃၀) ခန့် အကျဉ်း ချခံခဲ့ရပါတယ်။
ဗြိတိသျှအစိုးရဟာ ချင်းခေါင်းဆောင်များအား ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ချင်းတောင်ဒေသမှာ ဆူပူအုံကြွမှု များ ထပ်မံမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် စစ်တပ်များ အဆက်မပြတ် ပို့လွှတ်ခဲ့ပြီး လိုအပ်လျှင် ထပ်မံ စေလွှတ်နိုင်ရန်အတွက် ပခုက္ကူမြို့မှာ ဘတ်စ်ကား ၁၆ စီး အဆင်သင့်ထားရှိစေခဲ့သည်အထိ ကြောက် ရွံ့ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ မတ်လမှာ ပထမပင်လုံညီလာခံကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်းခေါင်း ဆောင်တို့ စည်းဝေးကြပြီး ပြည်မတောင်တန်း မခွဲခြား ဘဲ တိုင်းရင်းသားများအားလုံး ညီညွတ်စွာ အတူတကွ လွတ်လပ်ရေးအရယူရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေအိမ်မှာပြုလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဖဆပလရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ချစ် ကြည်ရေး တည်ဆောက်ရန် ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ချင်းတောင်တန်းဒေသအတွက် ဦးဝမ်းသူးမောင်း၊ ဦးဘဆိုင်နှင့် ရှယ်ကီး (ခေါ်) ဦးမောင်ကြီးအဖွဲ့မှ မြောက်ပိုင်းချင်းတောင်၊ သခင် အောင်မင်း၊ ဗိုလ်မောင် ကလေး နှင့် ဗိုလ်စံထွန်းတို့မှ တောင်ပိုင်း ချင်းတောင်အတွက် တာဝန်ယူ စည်းရုံးခဲ့ကြပါတယ်။
စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်များ ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ ဦးလှုရ်မှုန်း၊ ဦးကီယိုမန်းနှင့် ဦးထောင်ဇခုပ် တို့ဟာ ပင်လုံအစည်း အဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်မှာ သမိုင်းဝင် ပင်လုံ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၄၊ ၅ နှင့် ၆) ရက်များမှာလည်း ချင်း-ဗမာ ချစ်ကြည်ရေးအတွက် မကွေးတိုင်း၊ ထီးလင်း မြို့မှာ စည်းဝေးကြပြီး ချင်း-ဗမာချစ်ကြည်ရေး အထိမ်း အမှတ်ကျောက်တိုင်ကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ တတိယပတ်အတွင်း ရှမ်းပြည် နယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့မှာလည်း ရှမ်း၊ ကချင်နှင့် ချင်း ခေါင်းဆောင်များ ထပ်မံစည်းဝေးပြီး တောင်တန်း ဒေသများအားလုံးဟာ ညီညွတ်စွာဖြင့် ဗမာပြည်မနှင့် ပူးပေါင်း ပြီးလုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို အရယူရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်မှာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံဟာ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ် လက်အောက်မှ လွတ် မြောက်၍ လွတ်လပ်ရေးကို ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ချင်းတောင် တန်းဒေသကို ချင်းဝိသေသတိုင်းအဖြစ် ပြည်ထောင်စု အတွင်း ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီး ချင်းရေးရာကောင်စီ၊ ချင်းရေးရာဌာနနဲ့ ချင်းရေးရာဝန်ကြီးတို့ ပေါ်ပေါက်လာ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးမှာ လွတ် လပ်ရေးရဲ့အသီးအပွင့်ကို ရယူခံစားနိုင်ပါလျက် ချင်း ဝိသေသတိုင်းမှာတော့ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ ခြွင်းချန် ထားရစ်ခဲ့တဲ့ဓနရှင် ပဒေသရာဇ် အုပ်ချုပ်ရေးသာ ဖွံ့ဖြိုးရှင်သန်လျက် ရှိနေသေးတဲ့အတွက် ချင်းပြည်နယ် လူထုဟာ အုံကြွကြပါတော့တယ်။
ချင်းရေးရာဌာနမှ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ချင်းတောင်စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရန်ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး ဦးဝမ်းသူး မောင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ စည်သူ ဦးသိမ်း မောင်(အေ-တီ-အမ်) (နောင် တွင် ချင်းဝိသေသ တိုင်းမင်းကြီး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အများစုမှာ ဦးစည် သူမောင်ဟု မှားယွင်း သုံးစွဲနေ ကြသည်။ ။စကားချပ်)မှ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဦးစိုးဝင်း (အမျိုးသား ပညာဝန်ဟောင်း) မှ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင် ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ချင်းတောင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဟာ စုံစမ်းစစ် ဆေးမှုများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ (၁၀) ကြိမ်တိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးများအဖွဲ့သို့ ဗြူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးကို ဖျက်သိမ်း၍ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြင့် အစားထိုးအုပ်ချုပ်ရန်နှင့်တိုက်သူကြီးများဖြင့် အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ကို အဆုံးသတ်ပြီး ၎င်းတို့ မနစ်နာ စေရန်အတွက် ပင်စင်နှင့် ထောက်ပံ့ကြေးအချို့ကို ဝေပုံကျပေးသင့်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ယင်း ကာလအတွင်း ချင်းတောင်လူထု၏ လိုလားချက်အရ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်မှာ ချင်းအမျိုးသား ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၅၀ဝ၀ ခန့် ပါဝင်တဲ့ လူထု ညီလာခံကို ဖလမ်းမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး သမ္မတ စဝ်ရွှေ သိုက်ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ညီလာခံကြီးကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး ညီလာခံဒုတိယ နေ့ဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်မှာ တီးတိန်မြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ် ဦးထောင်ဇကိုင်း (Thang ZaKai) မှ သွေးစုပ်ဓနရှင်တို့၏ ပဒေသရာဇ် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် အား ပယ်ဖျက်ရန်အဆိုကို အဆိုအမှတ်(၄) အဖြစ် တင်သွင်းပြီး ဖလမ်းမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဆွန်းမန်း (Con Mang) နှင့် ကန်ပက်လက်မြို့ နယ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထန်းမောင်း (Htang Mong) တို့မှ ထောက်ခံ ကြပါတယ်။ သဘာပတိမှ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ မဲခွဲဆုံး ဖြတ်စေရာ ထောက်ခံမဲ(၅၀ဝဝ)၊ ကန့်ကွက်မဲ (၁၇) မဲ နှင့် ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာ သူ ကိုယ်စားလှယ် အပေါင်းမှ တစ်ခဲနက်အတည်ပြု နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ချင်းရေးရာကောင်စီဟာ ချင်းဝိသေသတိုင်းအား ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အုပ်ချုပ်နိုင်ရေးအတွက် အုပ်ချုပ် ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ၁၉၄၈ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံး နီးပါး အထူးကြိုးပမ်းရေးဆွဲခဲ့ရာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ချင်း ဝိသေသတိုင်းအက်ဥပဒေနှင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ချင်း ဝိသေသတိုင်း(ဥပဒေများသက်ဆိုင်ခြင်း) အက်ဥပဒေ ကို ၁၂.၁၀.၄၈ မှာ ကျင်းပတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ် တော်(ပါလီမန်)မှ အက်ဥပဒေအဖြစ် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ၁၈၉၆ ခုနှစ် ချင်းတောင်များ အက်ဥပဒေ အား ဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်မှာ ကျင်းပတဲ့ ချင်းရေးရာကောင်စီ အစည်းအဝေးမှာ ဦးဝမ်းသူးမောင်းဦးဆောင်တဲ့ ချင်းအမျိုးသား များမှ နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးကာလမှသည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ် လပ်ရေးရရှိပြီးဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့၏အကြွင်းအကျန် ပဒေသရာဇ်တိုက်သူကြီးများ ကွယ်ပျောက်၍ ဒီမိုက ရေစီစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သည့် ချင်းဝိသေသတိုင်း ပေါ် ပေါက်လာသည်အထိ အသက်သွေးချွေးပေါင်း မြောက် မြားစွာဖြင့် ပေးဆပ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရသည့် ချင်းအမျိုးသား များအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် “ချင်းအမျိုးသားနေ့” သတ်မှတ်သင့်ကြောင်း ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ တယ်။ နေ့ရက်သတ်မှတ်ရန်အတွက် ရွေးချယ်ရာမှာ တော့ –
၁။ (၂၀.၂.၁၉၁၈) တွင် မေမြို့ (ယခု ပြင်ဦး လွင်)၌ ချင်းအမျိုးသား ပညာမြှင့်တင်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ စတင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြခြင်း။
၂။ (၂၀.၂.၁၉၄၀) တွင် ကန်ပက်လက်တွင် ကျင်းပသော ဒါဘာပွဲ၌ ဗြိတိသျှတို့အား အကြီးအကျယ် အာခံ၍ ဆန္ဒပြခြင်း။
၃။ (၂၀.၂.၁၉၄၈) တွင် ဖလမ်းမြို့၌ လူထုစည်း ဝေးပွဲကြီး ကျင်းပ၍ ချင်းဝိသေသတိုင်းတွင် လူထုဆန္ဒအရအင်္ဂလိပ်အစိုးရမှ ခန့်အပ် ထားခဲ့သည့် တိုက်သူကြီးများအား ဖြုတ်ချ ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သည့်စနစ် အား အစားထိုးရန် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ ခြင်း။
စတဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာအဆက်ဆက်တို့ကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်ကို ချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် နှစ်စဉ်တရားဝင်ကျင်းပရန်အတည်ပြု သတ်မှတ်ပေးခဲ့ ကြပါတယ်။
(၂၀.၂.၁၉၄၀) မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကန်ပက်လက်ဒါ ဘာပွဲကို (၂၀.၂.၁၉၃၈)ဟုလည်းကောင်း၊ ဦးဝမ်းသူး မောင်းအပါအဝင် ချင်းခေါင်းဆောင်(၉) ဦး အဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရသည့် (၂၄.၃.၁၉၄၀) ကို (၂၀.၂.၁၉၃၉) ဟူ၍ လည်းကောင်း မဂ္ဂဇင်းနှင့် စာစောင်အများအပြားမှာ မှားယွင်းဖော်ပြမှုများ ရှိခဲ့ကြဖူးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး (လျှို့ဝှက်ဖိုင်)ဖြစ်တဲ့ “Defense Secretary’s Office,1940, Political Department (Confidential) NO. 500 D (p) Part III rSm “A meeting of representatives from allvillages and also ofalarge number of the Aphwe members was called atKanpetlet on the 20th of February 1940 and was addressed byCommissioner and Deputy of Commissioner” လို့ မှတ်တမ်း တင်ထားတဲ့အတွက် ကန်ပက်လက်ဒါဘာပွဲ ကျင်းပတဲ့ ရက်ဟာ (၂၀.၂.၁၉၃၈) မဟုတ်ဘဲ (၂၀.၂.၁၉၄၀) သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဝမ်းသူးမောင်းအပါ ချင်းခေါင်းဆောင် (၉)ဦး ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ရက်စွဲကိုလည်း ၎င်းဖိုင်မှာပဲ “Vawmthu Maung and 8 other Chin leaders were arrested on the 24th of March 1940” ဟု မှတ်တမ်းတင် ထားပြန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် (၁၈၊ ၄၊ ၁၉၄၀) ကြာသပတေးနေ့ထုတ် တိုးတက်ရေး သတင်းစာမှာ “ချင်းတောင်တွင်ချင်းလူမျိုးများ ဆူပူ ကြခြင်း” သတင်းမှ “ချင်းတောင်ခေါင်းဆောင်များကို ဘမ်းဆီးခြင်း” ခေါင်းစဉ်ခွဲအောက်၌ “ဤကဲ့သို့ မကွေး ခရိုင် ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီး မစ္စတာ မက္ကရီကင်နှင့် ခေါင်းဆောင် ဝမ်သူမောင်တို့ တွေ့ဆုံပြောဆိုပြီး နောက်၊ ၁၉၄၀ ခု၊ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်၊ ၁ ခေါင်း ဆောင် ဝမ်းသူးမောင်း၊ ၂ ဝမ်သုငိုင်၊ ၃ ရိန်လိုဟန်…….” အစရှိသဖြင့် ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် ဦးဝမ်းသူးမောင်း အပါ ချင်းခေါင်းဆောင် (၉)ဦး အဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ရက်စွဲဟာလည်း (၂၀.၂.၁၉၃၉) မဟုတ်ဘဲ ၂၄.၃.၁၉၄၀ သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားစေပါတယ်။
မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မသိမီလိုက်တဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ် များကို နှောင်းလူတို့ လေ့လာမှတ်သားနိုင်စေရန် အတွက် ဖော်ထုတ်တင်ပြကြရာမှာ အမှားအယွင်းရှိ တတ်ကြတာ ဓမ္မတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင်များ ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် မှားလည်းမှားခဲ့ကြသလို အမှား ကနေပဲ အမှန်ကိုရောက်အောင် ရှာဖွေပြုပြင်သွား ခဲ့ကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ယခုလဲ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်းမှ (၂၀၁၅) ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၀)မှာ ကျရောက်တဲ့ (၆၇) နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားကို ပေးပို့တဲ့ သဝဏ်လွှာဟာလည်း ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲဆိုသလိုပဲ မှားယွင်းခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း နောင်နှစ်များမှာကျင်းပတဲ့ ချင်းအမျိုးသားနေ့သို့ ပေးပို့မယ့် သဝဏ်လွှာများ မှာတော့ အသိကိုသတိနှင့် ယှဉ်ပြီးအမှားကို အမှန်ပြင် နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ပဲ နိဂုံးကမ္ပတ် အဆုံးသတ်အပ် ပါတယ်။
[ ရည်ညွှန်း။ ။ Defense Secretary’s Office,1940, Political Department (Confidential) NO. 500 D (p) Part III.တိုးတက်ရေး သတင်းစာ (၁၈၊ ၄၊ ၁၉၄၀) ]
ဒီရကျပိုငျးဖုနျးထဲမှာ ဒတောတှမြေားလာလို့ Ex HDD ထဲ ရှသေ့ငျ့တာရှေ့၊ ဖကျြသငျ့တာ ဖကျြပဈရငျးနဲ့လှနျခဲ့တဲ့ တဈလကြျောက သဝဏျလှာတဈခုကို သှားတှပေ့ါတယျ။ ပွညျထောငျစု လှတျတျော နာယက၊ ပွညျသူ့လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ သူရဦးရှမေနျးမှ ၂၀၁၅ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီ ၂၀ မှာ ကရြောကျတဲ့ ၆၇ နှဈမွောကျ ခငျြးအမြိုးသားနေ့ အခမျးအနားကိုပေးပို့တဲ့ သဝဏျလှာ ပဲဖွဈပါတယျ။ သဝဏျလှာမှာတှရေ့တဲ့ သမိုငျးမှားတဈခုက ခငျြးအမြိုးသားတျောလှနျရေး သမိုငျးမှာအငျမတနျ အရေးပါလှသလို၊ ခငျြး အမြိုးသားနေ့ သတျမှတျရာမှာလညျး ထညျ့သှငျး စဉျးစားခဲ့ရတဲ့ ၂၀.၂.၁၉၄၀ မှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ကနျပကျလကျ ဒါဘာပှဲကို ၂၀.၂.၁၉၃၈ လို့ ခုနှဈသက်ကရာဇျ မှားယှငျးဖျောပွထားခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ခငျြးအမြိုးသားလှုပျရှားမှုသမိုငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ သမိုငျးဖွဈရပျမြားကို ပွနျလညျဖျောထုတျ တငျပွရာမှာ အတှရေ့အမြားဆုံး အမှားသုံးခုရှိပါတယျ။ ကနျပကျလကျ ဒါဘာပှဲ ကငျြးပတဲ့ ရကျစှဲအမှား၊ ဦးဝမျးသူးမောငျးအပါ ခငျြးခေါငျးဆောငျကိုးဦး ဖမျးဆီးခံရတဲ့ ရကျစှဲအမှားနဲ့ ခငျြးတောငျစုံစမျးရေး ကျောမရှငျအတှငျးရေးမှူး စညျသူဦးသိမျးမောငျ (အေ၊ တီ၊ အမျ) အား ဦးစညျသူမောငျ ဟု မှားယှငျးသုံးစှဲနမှေုမြားပဲ ဖွဈကွပါတယျ။
ခငျြးအမြိုးသားနဖွေ့ဈပျေါလာပုံကို အနှဈခြုပျ ဖျောပွရလြှငျ ခငျြးအမြိုးသားမြားဟာ နယျခြဲ့အင်ျဂလိပျ လကျအောကျကိုကရြောကျပွီးနောကျ အခွအေနအေရ နယျခြဲ့အင်ျဂလိပျ စဈတပျမှာပဲ ဝငျရောကျအမှုထမျးခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နယျခြဲ့အင်ျဂလိပျဆီကရတဲ့ စဈပညာနဲ့ပဲ နယျခြဲ့အင်ျဂလိပျကို ပွနျလညျတျောလှနျခဲ့ကွပါတယျ။
၁၉၁၈ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၀ ရကျမှာတော့ မမွေို့ (ယခု ပွငျဦးလှငျ) မှာ “ခငျြးအမြိုးသားမြား ပညာ မွှငျ့တငျရေးအဖှဲ့”ကို စတငျဖှဲ့စညျးခဲ့ကွပါတယျ။ ၎င်းငျးအဖှဲ့မှာ ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ ဗိုလျကွီးအှမျပိုငျး (ဆူဘီဒါ)၊ ဒုဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ ဦးဝမျးသူးမောငျးနဲ့ အတှငျးရေးမှူး အဖွဈ ရကျလောငျးလိနျးတို့မှ ဦးဆောငျခဲ့ကွပွီး အဖှဲ့ ဝငျမြားအဖွဈ မွပွေနျ့အရှိုခငျြးမြားနဲ့ လူရှညျမြား ပါဝငျခဲ့ ကွပါတယျ။
ဦးဝမျးသူးမောငျးဟာ (၂၄.၁၂.၁၉၂၄) မှာ အင်ျဂလိပျ စဈတပျရဲ့ ဆူဘီဒါရာထူးမှ နှုတျထှကျခဲ့ပွီး ၁.၆.၁၉၂၅ မှာ ဝမျးသူးရှာမှာပဲ နရှေငျနယျကြောငျးဖှငျ့ပွီး အမြိုး သားရေးအတှကျ စတငျလှုပျရှားခဲ့ပါတယျ။ ဦးဝမျးသူး မောငျးဟာ ၁၉၃၄ ခုနှဈ၊ မငျးတပျမွို့နယျ၊ မသုနျနူး ကြေးရှာမှာ “ခငျြးအမြိုးသားမြား စညျးလုံးညီညှတျရေးအဖှဲ့”(ခ.မ.ည.ဖ) ကို ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး ၎င်းငျးအဖှဲ့ကိုပဲ ၁၉၃၉ ခုနှဈ၊ ဇူလိုငျလ ၂၈ ရကျမှာ “ခငျြးတောငျ ညီညှတျရေး အဖှဲ့”ဟု ပွောငျးလဲဖှဲ့စညျးခဲ့ကာ ဒို့ဗမာအစညျးအရုံး၊ ဖဆပလ အဖှဲ့ခြုပျတို့ဖွငျ့ ဆကျသှယျ၍ ဗွိတိသြှ ဘုရငျခံထံ ခငျြးအမြိုးသားမြား ရသငျ့ရထိုကျသော အခှငျ့ အရေးနှငျ့ နဈနာခကျြမြားအား တောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ဘုရငျခံမှ မကှေးတိုငျးဝနျရှငျတျောမငျးကွီး မစ်စတာ မက်ကရီကငျအား တာဝနျပေးတဲ့အတှကျ ဖလမျးအရေး ပိုငျမစ်စတာ အယျဘီနီလာ၊ ကနျပကျလကျ နယျခွား ဝနျထောကျ ဂြေ-ဖူးညိုတို့နဲ့အတူ ကနျပကျလကျသို့ သှားရောကျခဲ့ကွပါတယျ။
၁၉၄၀ ပွညျ့နှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၀ မှာ ကငျြးပ တဲ့ ဒါဘာပှဲကို ဦးဝမျးသူးမောငျး ခေါငျးဆောငျတဲ့ ခငျြးတောငျညီညှတျရေးအဖှဲ့အပါအဝငျလူထု ၁၀ဝ၀ ကြျောခနျ့ တကျရောကျခဲ့ကွပွီး ခငျြးအမြိုးသားမြားမှ မစ်စတာ မက်ကရီကငျအား ၎င်းငျးတို့လိုလားခကျြမြားကို တောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
မစ်စတာမက်ကရီကငျမှ ခငျြးတောငျညီညှတျရေး အဖှဲ့မှ တောငျးဆိုထားသော အရေးကွီးအခကျြမြားမှ ခငျြးတောငျဒသေအားပခုက်ကူဒိစတွိတျအတှငျး ထားရှိ မညျ့ကိစ်စအား လုံးဝ စဉျးစားမညျ မဟုတျကွောငျးနှငျ့ ကနျြတောငျးဆိုခကျြမြားအားလညျး မလိုကျလြောနိုငျ ကွောငျး ဖွကွေားရာမှာ လူထုမှ မခံမရပျနိုငျဖွဈပွီး လကျသီးလကျမောငျးတနျး၍ကနျ့ကှကျဆန်ဒပွခဲ့ကွပွီး ဒါဘာပှဲမှ ထှကျခှာသှားခဲ့ကွပါတယျ။ ဝနျရှငျတျော မငျးကွီး မစ်စတာမက်ကရီကငျနဲ့ အဖှဲ့လညျး ကွောကျရှံ့ ထိတျလနျ့ပွီး မွငျးကိုယျစီစီးကာ မကှေးတိုငျး၊ ဆောမွို့ နယျသို့ထှကျပွေးသှားခဲ့ကွပါတယျ။
ဒီနောကျမှာတော့ ဗွိတိသြှအစိုးရဟာ ခငျြးတောငျ ညီညှတျရေးအဖှဲ့ကို မတရားသငျးကွညောပွီး ၂၄.၃.၁၉၄၀ မှာခငျြးတောငျအရေးပိုငျ မစ်စတာ အယျဘီနီလာနဲ့ နယျခွားဝနျထောကျ ဂြေ-ဖူးညိုတို့မှ ဦးဝမျးသူးမောငျး အပါအဝငျ သခငျ ကိုးဦးအား ဝမျးသူးရှာမှာပဲ ခငျြး တောငျဥပဒေ ပုဒျမ ၁၄ (၁)၊ (ဃ) နဲ့ ဖမျးဆီးခဲ့ပါတယျ။ ၎င်းငျးတို့ကို စဈဆေးရနျ အစောငျ့၊ နယျခွားစဈသား ၁၁ ယောကျနဲ့ ကနျပကျလကျမွို့မှ မိုငျပေါငျး ၆၀ဝ ကြျော ဝေးတဲ့ ဖလမျးမွို့သို့ပို့ပွီး ပထမအသုတျအဖွဈ ထောငျ ခခြဲ့ပါတယျ။ သတ်တမအသုတျအထိ ဖမျးဆီးမှုမြားရှိခဲ့ပွီး ဖလမျး၊ တီးတိနျ၊ ဟားခါး၊ မွငျးခွံ၊ ကသာနဲ့ မန်တလေး ထောငျမြားမှာ ခငျြးအမြိုးသားပေါငျး (၁၃၀) ခနျ့ အကဉျြး ခခြံခဲ့ရပါတယျ။
ဗွိတိသြှအစိုးရဟာ ခငျြးခေါငျးဆောငျမြားအား ဖမျးဆီးပွီးနောကျ ခငျြးတောငျဒသေမှာ ဆူပူအုံကွှမှု မြား ထပျမံမဖွဈပျေါစရေေးအတှကျ စဈတပျမြား အဆကျမပွတျ ပို့လှတျခဲ့ပွီး လိုအပျလြှငျ ထပျမံ စလှေတျနိုငျရနျအတှကျ ပခုက်ကူမွို့မှာ ဘတျဈကား ၁၆ စီး အဆငျသငျ့ထားရှိစခေဲ့သညျအထိ ကွောကျ ရှံ့ခဲ့ပါတယျ။
၁၉၄၆ ခုနှဈ၊ မတျလမှာ ပထမပငျလုံညီလာခံကို ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးနှငျ့ ခငျြး၊ ကခငျြ၊ ရှမျးခေါငျး ဆောငျတို့ စညျးဝေးကွပွီး ပွညျမတောငျတနျး မခှဲခွား ဘဲ တိုငျးရငျးသားမြားအားလုံး ညီညှတျစှာ အတူတကှ လှတျလပျရေးအရယူရနျ ဆုံးဖွတျနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။ ၁၉၄၆ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ ၁၃ ရကျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး နအေိမျမှာပွုလုပျတဲ့ အစညျးအဝေးဆုံးဖွတျခကျြအရ ဖဆပလရဲ့ ဦးဆောငျမှုနဲ့ တိုငျးရငျးသားမြားနှငျ့ ခဈြ ကွညျရေး တညျဆောကျရနျ ကျောမရှငျဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး ခငျြးတောငျတနျးဒသေအတှကျ ဦးဝမျးသူးမောငျး၊ ဦးဘဆိုငျနှငျ့ ရှယျကီး (ချေါ) ဦးမောငျကွီးအဖှဲ့မှ မွောကျပိုငျးခငျြးတောငျ၊ သခငျ အောငျမငျး၊ ဗိုလျမောငျ ကလေး နှငျ့ ဗိုလျစံထှနျးတို့မှ တောငျပိုငျး ခငျြးတောငျအတှကျ တာဝနျယူ စညျးရုံးခဲ့ကွပါတယျ။
စညျးရုံးရေးခရီးစဉျမြား ပွီးဆုံးခြိနျမှာတော့ ဦးလှုရျမှုနျး၊ ဦးကီယိုမနျးနှငျ့ ဦးထောငျဇခုပျ တို့ဟာ ပငျလုံအစညျး အဝေးသို့ တကျရောကျခဲ့ကွပွီး ၁၉၄၇ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၂ ရကျမှာ သမိုငျးဝငျ ပငျလုံ စာခြုပျကို လကျမှတျရေးထိုး ခြုပျဆိုနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၄၇ ခုနှဈ၊ မတျလ (၄၊ ၅ နှငျ့ ၆) ရကျမြားမှာလညျး ခငျြး-ဗမာ ခဈြကွညျရေးအတှကျ မကှေးတိုငျး၊ ထီးလငျး မွို့မှာ စညျးဝေးကွပွီး ခငျြး-ဗမာခဈြကွညျရေး အထိမျး အမှတျကြောကျတိုငျကို စိုကျထူနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။ ၁၉၄၇ ခုနှဈ၊ မတျလ၊ တတိယပတျအတှငျး ရှမျးပွညျ နယျ၊ ညောငျရှမွေို့မှာလညျး ရှမျး၊ ကခငျြနှငျ့ ခငျြး ခေါငျးဆောငျမြား ထပျမံစညျးဝေးပွီး တောငျတနျး ဒသေမြားအားလုံးဟာ ညီညှတျစှာဖွငျ့ ဗမာပွညျမနှငျ့ ပူးပေါငျး ပွီးလုံးဝလှတျလပျရေးကို အရယူရနျ ဆုံးဖွတျ ခဲ့ကွပါတယျ။
၁၉၄၈ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၄ ရကျမှာ ပွညျထောငျစု မွနျမာနိုငျငံဟာ နယျခြဲ့အင်ျဂလိပျ လကျအောကျမှ လှတျ မွောကျ၍ လှတျလပျရေးကို ရယူနိုငျခဲ့ပွီး ခငျြးတောငျ တနျးဒသေကို ခငျြးဝိသသေတိုငျးအဖွဈ ပွညျထောငျစု အတှငျး ပါဝငျဖှဲ့စညျးနိုငျခဲ့ပွီး ခငျြးရေးရာကောငျစီ၊ ခငျြးရေးရာဌာနနဲ့ ခငျြးရေးရာဝနျကွီးတို့ ပျေါပေါကျလာ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပွညျထောငျစုတဈဝနျးလုံးမှာ လှတျ လပျရေးရဲ့အသီးအပှငျ့ကို ရယူခံစားနိုငျပါလကျြ ခငျြး ဝိသသေတိုငျးမှာတော့ နယျခြဲ့အင်ျဂလိပျတို့ ခွှငျးခနျြ ထားရဈခဲ့တဲ့ဓနရှငျ ပဒသေရာဇျ အုပျခြုပျရေးသာ ဖှံ့ဖွိုးရှငျသနျလကျြ ရှိနသေေးတဲ့အတှကျ ခငျြးပွညျနယျ လူထုဟာ အုံကွှကွပါတော့တယျ။
ခငျြးရေးရာဌာနမှ ၁၉၄၈ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၅ ရကျနစှေဲ့ဖွငျ့ ခငျြးတောငျစုံစမျးရေး ကျောမရှငျ ဖှဲ့စညျးရနျပွဋ်ဌာနျးခကျြတဈရပျ ထုတျပွနျကွညောခဲ့ပွီး ဦးဝမျးသူး မောငျးမှ ဥက်ကဋ်ဌ၊ စညျသူ ဦးသိမျး မောငျ(အေ-တီ-အမျ) (နောငျ တှငျ ခငျြးဝိသသေ တိုငျးမငျးကွီး ဖွဈလာခဲ့ပွီး အမြားစုမှာ ဦးစညျ သူမောငျဟု မှားယှငျး သုံးစှဲနေ ကွသညျ။ ။စကားခပျြ)မှ အတှငျးရေးမှူးနှငျ့ ဦးစိုးဝငျး (အမြိုးသား ပညာဝနျဟောငျး) မှ အဖှဲ့ဝငျအဖွဈ ပါဝငျဆောငျ ရှကျခဲ့ကွပါတယျ။
ခငျြးတောငျစုံစမျးရေးကျောမရှငျဟာ စုံစမျးစဈ ဆေးမှုမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးမှုမြား (၁၀) ကွိမျတိုငျ ပွုလုပျခဲ့ပွီး ၁၉၄၈ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ ၃၀ ရကျမှာ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံတျော ဝနျကွီးမြားအဖှဲ့သို့ ဗွူရိုကရစေီအုပျခြုပျရေးကို ဖကျြသိမျး၍ ဒီမိုကရစေီ စနဈဖွငျ့ အစားထိုးအုပျခြုပျရနျနှငျ့တိုကျသူကွီးမြားဖွငျ့ အုပျခြုပျသညျ့စနဈကို အဆုံးသတျပွီး ၎င်းငျးတို့ မနဈနာ စရေနျအတှကျ ပငျစငျနှငျ့ ထောကျပံ့ကွေးအခြို့ကို ဝပေုံကပြေးသငျ့ကွောငျး တငျပွခဲ့ကွပါတယျ။ ယငျး ကာလအတှငျး ခငျြးတောငျလူထု၏ လိုလားခကျြအရ ၁၉၄၈ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၀ ရကျမှာ ခငျြးအမြိုးသား ကိုယျစားလှယျပေါငျး ၅၀ဝ၀ ခနျ့ ပါဝငျတဲ့ လူထု ညီလာခံကို ဖလမျးမွို့မှာ ကငျြးပခဲ့ပွီး သမ်မတ စဝျရှေ သိုကျကိုယျတိုငျ တကျရောကျခဲ့ပါတယျ။
ညီလာခံကွီးကို ၁၉၄၈ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၉ ရကျမှ ၂၂ ရကျအထိ ကငျြးပခဲ့ပွီး ညီလာခံဒုတိယ နဖွေ့ဈတဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၀ ရကျမှာ တီးတိနျမွို့နယျ ကိုယျစားလှယျ ဦးထောငျဇကိုငျး (Thang ZaKai) မှ သှေးစုပျဓနရှငျတို့၏ ပဒသေရာဇျ အုပျခြုပျရေးစနဈ အား ပယျဖကျြရနျအဆိုကို အဆိုအမှတျ(၄) အဖွဈ တငျသှငျးပွီး ဖလမျးမွို့နယျကိုယျစားလှယျ ဦးဆှနျးမနျး (Con Mang) နှငျ့ ကနျပကျလကျမွို့ နယျကိုယျစားလှယျ ဦးထနျးမောငျး (Htang Mong) တို့မှ ထောကျခံ ကွပါတယျ။ သဘာပတိမှ ဒီမိုကရစေီ နညျးကြ မဲခှဲဆုံး ဖွတျစရော ထောကျခံမဲ(၅၀ဝဝ)၊ ကနျ့ကှကျမဲ (၁၇) မဲ နှငျ့ ညီလာခံသို့ တကျရောကျလာ သူ ကိုယျစားလှယျ အပေါငျးမှ တဈခဲနကျအတညျပွု နိုငျခဲ့ကွပါတယျ။
ခငျြးရေးရာကောငျစီဟာ ခငျြးဝိသသေတိုငျးအား ဒီမိုကရစေီနညျးကြ အုပျခြုပျနိုငျရေးအတှကျ အုပျခြုပျ ရေးစညျးမဉျြးဥပဒမြေားကို ၁၉၄၈ ခုနှဈ တဈနှဈလုံး နီးပါး အထူးကွိုးပမျးရေးဆှဲခဲ့ရာ ၁၉၄၈ ခုနှဈ၊ ခငျြး ဝိသသေတိုငျးအကျဥပဒနှေငျ့ ၁၉၄၈ ခုနှဈ၊ ခငျြး ဝိသသေတိုငျး(ဥပဒမြေားသကျဆိုငျခွငျး) အကျဥပဒေ ကို ၁၂.၁၀.၄၈ မှာ ကငျြးပတဲ့ တိုငျးပွုပွညျပွုလှတျ တျော(ပါလီမနျ)မှ အကျဥပဒအေဖွဈ အတညျပွု ဆုံးဖွတျခဲ့ပွီး ၁၈၉၆ ခုနှဈ ခငျြးတောငျမြား အကျဥပဒေ အား ဖကျြသိမျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
၁၉၅၀ ပွညျ့နှဈ၊ အောကျတိုဘာလ ၉ ရကျမှာ ကငျြးပတဲ့ ခငျြးရေးရာကောငျစီ အစညျးအဝေးမှာ ဦးဝမျးသူးမောငျးဦးဆောငျတဲ့ ခငျြးအမြိုးသား မြားမှ နယျခြဲ့တျောလှနျရေးကာလမှသညျ မွနျမာနိုငျငံ လှတျ လပျရေးရရှိပွီးဗွိတိသြှနယျခြဲ့တို့၏အကွှငျးအကနျြ ပဒသေရာဇျတိုကျသူကွီးမြား ကှယျပြောကျ၍ ဒီမိုက ရစေီစနဈဖွငျ့ အုပျခြုပျသညျ့ ခငျြးဝိသသေတိုငျး ပျေါ ပေါကျလာသညျအထိ အသကျသှေးခြှေးပေါငျး မွောကျ မွားစှာဖွငျ့ ပေးဆပျတိုကျပှဲဝငျခဲ့ရသညျ့ ခငျြးအမြိုးသား မြားအား ဂုဏျပွုသောအားဖွငျ့ “ခငျြးအမြိုးသားနေ့” သတျမှတျသငျ့ကွောငျး ဝိုငျးဝနျးဆှေးနှေးခဲ့ကွပါ တယျ။ နရေ့ကျသတျမှတျရနျအတှကျ ရှေးခယျြရာမှာ တော့ –
၁။ (၂၀.၂.၁၉၁၈) တှငျ မမွေို့ (ယခု ပွငျဦး လှငျ)၌ ခငျြးအမြိုးသား ပညာမွှငျ့တငျရေး အဖှဲ့ ဖှဲ့စညျး၍ စတငျလှုပျရှားခဲ့ကွခွငျး။
၂။ (၂၀.၂.၁၉၄၀) တှငျ ကနျပကျလကျတှငျ ကငျြးပသော ဒါဘာပှဲ၌ ဗွိတိသြှတို့အား အကွီးအကယျြ အာခံ၍ ဆန်ဒပွခွငျး။
၃။ (၂၀.၂.၁၉၄၈) တှငျ ဖလမျးမွို့၌ လူထုစညျး ဝေးပှဲကွီး ကငျြးပ၍ ခငျြးဝိသသေတိုငျးတှငျ လူထုဆန်ဒအရအင်ျဂလိပျအစိုးရမှ ခနျ့အပျ ထားခဲ့သညျ့ တိုကျသူကွီးမြားအား ဖွုတျခြ ပွီး ဒီမိုကရစေီစနဈဖွငျ့ အုပျခြုပျသညျ့စနဈ အား အစားထိုးရနျ အတညျပွုဆုံးဖွတျနိုငျခဲ့ ခွငျး။
စတဲ့ သမိုငျးအစဉျအလာအဆကျဆကျတို့ကွောငျ့ ဖဖေျောဝါရီလ (၂၀) ရကျကို ခငျြးအမြိုးသားနအေ့ဖွဈ နှဈစဉျတရားဝငျကငျြးပရနျအတညျပွု သတျမှတျပေးခဲ့ ကွပါတယျ။
(၂၀.၂.၁၉၄၀) မှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ကနျပကျလကျဒါ ဘာပှဲကို (၂၀.၂.၁၉၃၈)ဟုလညျးကောငျး၊ ဦးဝမျးသူး မောငျးအပါအဝငျ ခငျြးခေါငျးဆောငျ(၉) ဦး အဖမျးဆီး ခံခဲ့ရသညျ့ (၂၄.၃.၁၉၄၀) ကို (၂၀.၂.၁၉၃၉) ဟူ၍ လညျးကောငျး မဂ်ဂဇငျးနှငျ့ စာစောငျအမြားအပွားမှာ မှားယှငျးဖျောပွမှုမြား ရှိခဲ့ကွဖူးပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ အင်ျဂလိပျတို့ရဲ့ နိုငျငံရေး (လြှို့ဝှကျဖိုငျ)ဖွဈတဲ့ “Defense Secretary’s Office,1940, Political Department (Confidential) NO. 500 D (p) Part III rSm “A meeting of representatives from allvillages and also ofalarge number of the Aphwe members was called atKanpetlet on the 20th of February 1940 and was addressed byCommissioner and Deputy of Commissioner” လို့ မှတျတမျး တငျထားတဲ့အတှကျ ကနျပကျလကျဒါဘာပှဲ ကငျြးပတဲ့ ရကျဟာ (၂၀.၂.၁၉၃၈) မဟုတျဘဲ (၂၀.၂.၁၉၄၀) သာ ဖွဈတယျဆိုတာကို သိရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဦးဝမျးသူးမောငျးအပါ ခငျြးခေါငျးဆောငျ (၉)ဦး ဖမျးဆီးခံရတဲ့ ရကျစှဲကိုလညျး ၎င်းငျးဖိုငျမှာပဲ “Vawmthu Maung and 8 other Chin leaders were arrested on the 24th of March 1940” ဟု မှတျတမျးတငျ ထားပွနျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ (၁၈၊ ၄၊ ၁၉၄၀) ကွာသပတေးနထေု့တျ တိုးတကျရေး သတငျးစာမှာ “ခငျြးတောငျတှငျခငျြးလူမြိုးမြား ဆူပူ ကွခွငျး” သတငျးမှ “ခငျြးတောငျခေါငျးဆောငျမြားကို ဘမျးဆီးခွငျး” ခေါငျးစဉျခှဲအောကျ၌ “ဤကဲ့သို့ မကှေး ခရိုငျ ဝနျရှငျတျောမငျးကွီး မစ်စတာ မက်ကရီကငျနှငျ့ ခေါငျးဆောငျ ဝမျသူမောငျတို့ တှဆေုံ့ပွောဆိုပွီး နောကျ၊ ၁၉၄၀ ခု၊ မတျလ ၂၄ ရကျနတှေ့ငျ၊ ၁ ခေါငျး ဆောငျ ဝမျးသူးမောငျး၊ ၂ ဝမျသုငိုငျ၊ ၃ ရိနျလိုဟနျ…….” အစရှိသဖွငျ့ ဖျောပွထားတဲ့အတှကျ ဦးဝမျးသူးမောငျး အပါ ခငျြးခေါငျးဆောငျ (၉)ဦး အဖမျးဆီးခံရတဲ့ ရကျစှဲဟာလညျး (၂၀.၂.၁၉၃၉) မဟုတျဘဲ ၂၄.၃.၁၉၄၀ သာ ဖွဈတယျဆိုတာ သိသာထငျရှားစပေါတယျ။
မိမိတို့ကိုယျတိုငျမသိမီလိုကျတဲ့ သမိုငျးဖွဈရပျ မြားကို နှောငျးလူတို့ လလေ့ာမှတျသားနိုငျစရေနျ အတှကျ ဖျောထုတျတငျပွကွရာမှာ အမှားအယှငျးရှိ တတျကွတာ ဓမ်မတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပညာရှငျမြား ကိုယျတိုငျပငျလြှငျ မှားလညျးမှားခဲ့ကွသလို အမှား ကနပေဲ အမှနျကိုရောကျအောငျ ရှာဖှပွေုပွငျသှား ခဲ့ကွရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ယခုလဲ ပွညျထောငျစု လှတျတျော နာယက၊ ပွညျသူ့လှတျတျော ဥက်ကဌ သူရ ဦးရှမေနျးမှ (၂၀၁၅) ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီ (၂၀)မှာ ကရြောကျတဲ့ (၆၇) နှဈမွောကျ ခငျြးအမြိုးသားနေ့ အခမျးအနားကို ပေးပို့တဲ့ သဝဏျလှာဟာလညျး ပညာရှိ သတိဖွဈခဲဆိုသလိုပဲ မှားယှငျးခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ သို့သျောငွားလညျး နောငျနှဈမြားမှာကငျြးပတဲ့ ခငျြးအမြိုးသားနသေို့ ပေးပို့မယျ့ သဝဏျလှာမြား မှာတော့ အသိကိုသတိနှငျ့ ယှဉျပွီးအမှားကို အမှနျပွငျ နိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ရငျးနဲ့ပဲ နိဂုံးကမ်ပတျ အဆုံးသတျအပျ ပါတယျ။
[ ရညျညှနျး။ ။ Defense Secretary’s Office,1940, Political Department (Confidential) NO. 500 D (p) Part III.တိုးတကျရေး သတငျးစာ (၁၈၊ ၄၊ ၁၉၄၀) ]